Takatarisana | ECommerce nhau
Dambudziko rehutano rakakonzerwa neCovid-19 coronavirus rakonzeresa mhirizhonga nekudonha nyika yese. Kune vanhu vazhinji vane njodzi vanofanirwa kuzvivaka pachavo zvishoma nezvishoma. Nekuda kweichi chiitiko, a mugari, musangano pamwe neasina bato bato ane chinangwa chikuru ndechekuratidza mupiro une chikamu chakazvimiririra mukugadzirisa zvakajairika muhupfumi hweSpain. Sangano rinozivikanwa nezita rekuti Damos La Cara.
1 Mamiriro ezvinhu ehupfumi nehutano dambudziko
2 Ndiani anoumba musangano weDamos La Cara
3 Chinangwa chesangano reDamos La Cara
Mamiriro ezvinhu ehupfumi nehutano dambudziko
Hakuchina zvimwe zvekuona kupfuura muSpain yese, 89% emakambani ane mhuri uye ivo vane chinangwa chekuda chinosanganisira kuwanda kwenzvimbo dzinoumbwa nemabhizinesi emhuri. Aya mabhizinesi emhuri akaronga kuona zviitiko zvinoitwa nevese vadyidzani kuti vape rutsigiro rwakajairika kumatambudziko ehutano nehupfumi. Isangano rezvemagariro risingaregi kukura zvichipiwa kugashira kukuru kwarinoita, kuva hwaro hwechiitiko chakasimba chekuita muhondo yekudzora ivhu rese ratakurwa nehutachiona kubva kwatiri.
En Tinopa kumeso ivo anopfuura makambani chiuru nemazana mana kubva kumatunhu ese eSpain izvo zvakauya pamwe chete nechinangwa chekukunda dambudziko rehupfumi nehutano. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti vega vega chikamu chakakosha kugadzirisa iyi yakaoma mamiriro, nekuti chikamu chehurumende chete hachizokwanisa kutora. Uyezve, 67% yebasa rega rega muSpain mabhizinesi emhuri. Izvi zvinoita kuti vatore chinzvimbo chakakosha mukutsvaga mhinduro dzenguva refu.
Ndiani anoumba musangano weDamos La Cara
Uku kufambidzana kwenzanga kunoumbwa nevanhu vese vanoita mabhizinesi emhuri eSpanish. Aya makambani anorema zvakanyanya pahupfumi uye nejira rinogadzira. Mabhizinesi emhuri ane hurefu hwakareba uye kuzvipira padyo kuvagari. Izvi zvinoratidzwa mu kusimba kukuru uye kubatana munguva yedambudziko.
Hwaro hwesangano reDamos La Cara kukoshesa hunhu hukuru hwemabhizimusi emhuri: chiratidzo chenguva refu. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti mapurojekiti ane purofiti yakanaka uye zvinogutsa mhedzisiro zvinoda chiratidzo chenguva refu. Iyo nguva yakaringana yekuisa hwaro hwakasimba neyakavakirwa mamiriro ayo anogona kutsigirwa nekufamba kwenguva. Iyo yakawanda yakawanda yemapurojekiti anotarisirwa nemabhizinesi emhuri anova kuongororwa uye kutungamirirwa nezvizvarwa zvitatu zvezita rimwe chete. Izvi zvinoreva kuzvipira kune mugari padanho repamusoro maererano nebasa, nharaunda, capital technology, chengetedzo, trust, nezvimwe.
Chinangwa chesangano reDamos La Cara
Chinangwa chikuru chesangano reDamos La Cara kuratidza kuwanda kwemabhizinesi emhuri. Aya makambani makambani emakore-emakore anga achichinjira kumamiriro matsva ezveupfumi uye matekinoroji matsva. Kuti vaite izvi, ivo vakada zvizvarwa zvinoverengeka izvo zvave kukwanisa kuvandudza mashandiro uye kugadzirisa masevhisi kuzadzisa zvido uye zvinotarisirwa zvevagari. Zvakare chikamu chesangano iri matanho matsva ayo anozivisa shanduko mukuvandudza kwetekinoroji, kusimudzira uye nekudyidzana kwenyika mumabhizimusi emhuri. Zvese izvi zvichitarisa kuti zvinochengetedza mudzi uye musimboti wepanzvimbo munzvimbo yawakatangira.
Chimwe chinangwa cheDamos La Cara ndechekusimudzira mweya wevemabhizimusi wezvizvarwa zvitsva, sezvo yave imwe yembiru dzekudzosera nzanga nehupfumi.
Izvo zvikonzero zvinoita kuti kufamba kweDamos La Cara kuve kwakakosha ndeiyi inotevera:
MuSpain 89% emakambani ane mhuri.
67% yebasa repachivande kuSpain inogadzirwa nebhizinesi remhuri.
Bhizinesi remhuri rinopa 57,1% yeGDP munyika medu.
Ivhareji yehupenyu hurefu hwemabhizinesi emhuri makore makumi matatu nematatu, nepo mumabhizinesi asiri emhuri avhareji iri makore gumi nemaviri.
Mabhizinesi emhuri akaratidzira kuve anotsigira kwazvo, akasimba uye iwo akaisa mari zvakanyanya munguva yedambudziko.
Imwe yemienzaniso yakatanhamara yemabhizinesi emhuri anopinda mubato reDamos La cara ndiyo Serra Boka. Iri ibhizimusi remhuri rinoshanda muboka rekutaurirana mune pepanhau reUltima Hora. Chinangwa cheSerra Group ndechekupa ruzivo kukosha kwarunokodzera pasina kugutsa muverengi pamusoro wenyaya wedenda iri. Kuti uite izvi, zvinoedza kwazvo, kutora matanho ese ekuchengetedza kune vashandi vayo uye nekuvimbisa kuendesa chokwadi kwemashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Takatarisana